RASMI: Inter Milan oo Xaqiijisay inay Ciyaaraha ka joojisay xiddigeeda Radja Nainggolan!??…(Maxaa dhacay?) – Gool FM
RASMI: Inter Milan oo Xaqiijisay inay Ciyaaraha ka joojisay xiddigeeda Radja Nainggolan!??…(Maxaa dhacay?)
Byare December 23, 2018
(Milan) 23 Dis 2018. Naadiga Inter Milan ayaa ganaax dul dhigtay xiddigeeda qadka dhexe ee Radja Nainggolan iyadoona ku wargalisay inuusan kooxda u ciyaari doonin kulamada soo socda sababo ay ku sheegeen mid Anshaxa ah.
Laacibka reer Belgium ayaa Inter kaga soo biiray Roma bishii June heshiis la sheegay inuu ku kacay 38-milyan oo euro oo lagu daray Nicolo Zaniolo inkastoo ilaa iminka uusan soo bandhigin wixii laga filayay.
Wuxuu dhaliyay 2-gool 11-kulan uu ka soo muuqday horyaalka Serie A kal ciyaareedkan iyadoo ay kooxdiisuna fadhiso kaalinta saddexaad.
Kooxda reer Talyaani ayaa si lama filaan ah dhawaan uga dhawaajisay in Nainggolan uusan u safan doonin kooxda kulamada soo socda.
“Inter waxay xaqiijineysaa in Radja Nainggolan si ku meel gaar ah laga ganaaxay dha-dhaqaaqyada kubbada cagta sababo la xiriira Dishibiliinka/Anshaxa.”. Sidaa ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay kooxda Inter Milan.
Rooney oo ka hadlay go’aanka ay Manchester United ka qaadatay Jose Mourinho